DAAWO: Axmed Madoobe oo Khudbad ka jeediyey Muqdisho, oo si la yaab leh uga hadlay R/wasaaraha Cusub MUUQAAL! | kowtharmedia.com
Home MAQAALO DAAWO: Axmed Madoobe oo Khudbad ka jeediyey Muqdisho, oo si la yaab leh uga hadlay R/wasaaraha Cusub MUUQAAL!
DAAWO: Axmed Madoobe oo Khudbad ka jeediyey Muqdisho, oo si la yaab leh uga hadlay R/wasaaraha Cusub MUUQAAL!
Feb 24, 2017MAQAALO, MUUQAAL
Madaxwyanaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) ayaa Khudbad ka jeediyey magaalada Muqdisho, Kadib Kulan uu la qaatay Xildhibaanada Labada Aqal ee laga soo doortay Jubaland.
MUUQAALKA ISLAAN AXMED MADOWE, HALKAAN HOOSE KADAAWO
Previous PostDeegaano ka tirsan dalka Talyaaniga oo laga qaxayo ka dib musiibo rabbaani ah oo lagu arkay (Daawo Sawirro) Next PostDaawo Sawirro: Banaanbax ballaaran oo Maanta ka socda Muqdisho & masuuliyiin ka qeyb galaysa!